UMaZet uzoluleka ngeZwi kolwe-TV | Isolezwe
UMaZet uzoluleka ngeZwi kolwe-TV
Isolezwe / 21 May 2012, 11:42am /
17/05/12 DURBAN: ZANELE MBOKAZI ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
UBUYE ngezinkani usomabhizinisi waseThekwini odumile uZanele LaMbokazi Nkambule osezoba nohlelo lwethelevishini lwezingxoxo oluthi yena oluzobe ludingida ngobudlelwano babantu noNkulunkulu.
Lolu hlelo olubizwa ngeKhwezela/Rekindle With Zanele luzoqala ngoJuni 10, ludlale njalo ngeSonto, ngo-5.30 ntambama ku-SABC1.
UZanele obebonakala ebusweni ukuthi uchichima injabulo, uthe lolu hlelo luzobe lukhuma ngobudlelwano phakathi kwezithandani nokubaluleka kokuhamba noNkulunkulu.
“Sizobe sikhuluma ngobudlelwano ngoba wonke umuntu uyathinteka uma kukhulunywa ngobudlelwano. Mhlawumbe uhleli nje ekhaya uyazibuza ukuthi isoka lakho likushada nini noma uyazibuza ukuthi u-anti wakho akamshiyi ngani umyeni omhlukumezayo. Sizobe sixoxa ngakho konke lokhu sithatha izeluleko eZwini likaNkulunkulu,” kusho kusho yena.
IKhwezela/Rekindle With Zanele izoba nezazi ezihlokweni okusuke kuxoxwa ngazo kodwa zizobe zeluleka abantu ngokweZwi.
Uthe uzoba khona nomyeni wakhe uBishop Mpendulo Nkambule kwezinye iziqephu.
Ngokusho kukaZanele, ngeke axoxe ngobudlelwano bezithandani kuphela kodwa uzobuye akhulume nangomamezala nobabezala, isihloko esishisayo sabesifazane abahola ukwedlula abayeni babo nokunye okuningi.
Kuzobuye kubhekwe nodaba lwabathandana nobulili obufanayo emakhaya, kwelulekwe abazali ukuthi lithini iZwi ngokuhlala nokwamukela abantu abanjena.
“Kuningi esizobe sikhuluma ngakho kodwa okuhlukile wukuthi sizobe sinikeza izeluleko ngokuthi lithini iZwi. Ngeke sitshele abantu ukuthi benzeni kodwa konke esikushoyo kuzobe kuphuma eZwini. Kubalulekile ukuthi sihambe noNkulunkulu empilweni yethu, sibe naye kukho konke esikwenzayo,” kusho uZanele.
Ugqugquzele abantu ukuba bamlandele nasenkundleni yokuxhumana kwi-internet i-twitter, igama lakhe [email protected]
Ubuye waveza ukuthi uzokhipha enye incwadi ngoJulayi ngoba inhloso yakhe wukuletha ithemba kubantu.
Ebuzwa ukuthi usitholaphi isikhathi sokwenza zonke lezi zinto ngoba uhlale ematasa uvele wahleka, wase ethi konke akwenzayo kuwubizo kuyena futhi ngeke aphumule uma lungakapheli uhambo lwakhe uNkulunkulu ambekele lona.
Ubuye wathi unabantu abamesekayo abaziyo ukuthi ufunani.